ZIP waa qaab archive isticmaalay in uu kaydiyo faylasha ee gobolka ciriiri ah. Waxaa dadku isticmaalo in nidaamyada hawlgalka Windows. Ka dib markii ay soo degsado file a in qaab ZIP ah, waxyaabaha ay u baahan tahay file unpacking ka hor furitaanka oo iyaga sixiddiisa. Faa'iidada ugu weyn ee la isticmaalayo qaab ZIP waa xaqiiqda ah in uu yahay nooca archive ugu caansan. Si kastaba ha ahaatee, qaab ZIP aanu lahayn qaababka lagama maarmaanka ah oo la helo waa sida rar qaabab kale archive.
Rar waa qaab ay isticmaalaan archiver WinRAR. Shaqooyinka qaab rar la mid ah in qaab ZIP tan iyo markii ay yihiin labada weel xogta. Labada iyaga ka mid ah ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu cadaadin badan oo files. Si kastaba ha ahaatee, marka la barbar dhigo qaab ZIP ah, rar uu leeyahay muuqaalada badan oo horumarsan sida soo socda: archives sahlan multivolume, riixo dhagan, hababka qoraalka multimedia, AES-128 ilaalinta, caawiyay inay cusboonaysiiyaan archive ah xitaa ay dhacdo in burburka xogta jirka iyo taageero koodh caalamiga si loo farsameeyo magacyada file aan Ingiriiska.
Qeybta 1: Top 5 rar Crackers Password
FREE AMA LOO BIXIYAY
BIXIYAY - USD 19,95
KRyLack rar Recovery Password Windows XP, VISTA, 7, 8
Rar Password Recovery Professional Windows XP, Vista, 7, 8 iyo Windows Server 2008, 2011, 2012
BIXIYAY - USD 29,99
Daossoft rar Recovery Password Windows 2000, 2003, 2008, XP, Vista, 7
BIXIYAY - USD 17,95
Sida ay magaceeda soo jeedisay, rar Password Unlocker, ayaa sidoo kale loo magacaabay WinRAR password cracker, waxay ka caawisaa soo kabsado sirta lumay ee files rar. Barnaamijka wuxuu leeyahay saddex siyaabood in ay dib u soo ceshano sirta ah ee kala ah caayaan-force, caayaan-force la maaskaro user qeexan iyo qaamuuska. Waxaa intaa dheer, waxa ay taageertaa dhammaan faylasha rar abuuray by barnaamij kasta.
Marka furitaanka barnaamijka, waxaad leedahay interface shaqsi ah la laba doorasho oo waaweyn: Recovery Password rar iyo Raadi lo Files. Rar Recovery Password kuu ogolaanaya in aad si uu u furo file rar in aad rabto in aad soo kabsado sirta ah halka Search lo Faylal ay baaritaanku nidaamka oo dhan si aad u ogaato faylasha lo a.
Faa'iidada ugu weyn ee barnaamijka waa ay interface user si sahlan loo isticmaali.
Waxaad haysan doontaa wax dhibaato ah adakaanayso u dhex. Doorashada faylka rar aad rabto in lagu furo waa mid sahlan.
Si kastaba ha ahaatee, iyadoo la isticmaalayo barnaamijka rar Password Unlocker, waxaa jira labo ka mid ah shilalka. Tani waa dhibaato yar in mustaqbalka lagu go'an laga yaabaa in kastoo.
Sidoo kale, waxaad u baahan tahay in ay soo iibsato nooca buuxda u USD 19,95 inuu ka soo kabsado ka badan password saddex qof.
KRyLack rar Recovery Password
KRyLack rar Recovery Password waa aalad cracker password rar lacag la'aan ah. Waxay ka dhigaysa isticmaalka farsamada caayaan-ciidanka helida sirta ah.
Screen ugu weyn ee barnaamijka kuu ogolaanaysaa inaad dhigay cabbir kasta oo aad rabto. Waxaad dooran kartaa file rar ah adigoo riixaya batanka caleenta ah. Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad soo qaado qof oo dhigaya aad u malaynayso in sirta ah waxaa ku jira taas oo ka dhigaysa habka soo kabashada si degdeg ah. Character dhigaya waxaad dooran kartaa waa Laatiin, meelaha, lambar iyo calaamadaha. A xaraf dhigan user qeexan ayaa sidoo kale waxaa la heli karaa. Intaas waxaa sii dheer, waxaad dooran kartaa habka ay u soo kabashada ay doorashada ka caayaan-force, maaskaro, iyo qaamuuska.
Interface ayaa user barnaamijka dhigayaa dhammaan goobaha bartamaha daaha si fudud u helaan.
Waxaa intaa dheer, soo kabashada uu yahay furuhu quruxsan degdeg ah aad. Tani waa sababta uu barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad doorato nooc dabeecad gaar ah.
Rar Password Recovery Professional waa software unlocker password. Qalab uu leeyahay saddex hab oo weerar: caayaan-force, caayaan-force maaskarada iyo qaamuuska. Waxaa la filaayo in CPUs multi-muhiimka ah iyo NVIDIA-GPU inuu ka soo kabsado sirta ah si degdeg ah.
Interface wuxuu ka kooban yahay afar tabs kuwaas oo dib u soo kabashada, caayaan-force, qaamuuska iyo fursadaha. Si aad u bilaabin isticmaalka barnaamijka, guji "Open 'inay dajiyaan archive password-ilaaliyo rar ah. Next, ka soo xusho labada caayaan-force ama dictionary weerar oo calan kor-beegyada uu u. Ugu dambeyntii, guji "Start" laga bilaabi karo habka wax kaqabashada.
Waxaa xusid mudan in codsiga uu leeyahay design qurux badan. Wax walba waa fududahay in la isticmaalo iyo ka farxiyey indhaha.
Waxaad ka arki kartaa bar horumarka iyo qaar ka mid ah macluumaadka inta ay socoto dib u soo kabashada oo kaa hayo updated ah.
Dhibaatada ay leedahay version xorta ah waa in ay ku xadidayaa sirta ah in la soo kabsaday karaa in seddex qof oo keliya. Si aad u hesho ka mid ah xannibaad tan aad leedahay inay bixiso USD 19,95.
Rar Password Recovery Magic waa aalad xirfad loo adeegsado sanaanayaa lambarka sirta ah ee archives rar.
Interface ugu weyn ee kuu ogolaanaysaa inaad ku darto archives lo rar adigoo riixaya batanka furan. The button goobaha leedahay fursado ay ciidamada caayaan oo dictionary. Hab caayaan-force wuxuu kuu ogol yahay in ay ka mid xarfaha, nambarada iyo calaamadaha ay doortaan, iyada oo ku xiran waxa aad is leedahay waa sirta ah ee wax kaqabashada dhakhso badan. Waayo, xaalka qaamuuska, waxaad dooran kartaa file qoraalka ay ku jiraan erayada ah in la baadhi karo.
Waxay leedahay interface ka fududahay in la isticmaalo. Ma jiraan wax gooladaha waxbarashada marka la isticmaalayo waxaa markii ugu horeysay.
Waxaa intaa dheer, qalab wuxuu awood u ogaato sirta ah ee archive rar ah si deg deg ah. In dhawr miridh, geeddi-socodka lagu sameeyo.
In kastoo version oo lacag la'aan ah oo keliya ayaa loo isticmaali karaa toban jeer, lacagta looga baahan yahay nooca buuxda waa USD 29,99.
Daossoft rar Recovery Password
Daossoft rar Recovery Password waa jawaabta marka ma furi kartid file rar ah sababtoo ah waxaad u halmaanteen la sirta ah. Waa barnaamij taas oo uu leeyahay awoodda furo sirta ah la isticmaalayo saddex doorasho weerarka. Doorashooyinkaasi waxay yihiin caayaan-force, caayaan-force la maaskaro user qeexan iyo qaamuuska.
Gujinaya tab furan kuu ogolaanaya in aad caleenta iyo dooran rar files in ay yihiin password-ilaaliyo. Codsiga waxay bixisaa noocyo kala duwan oo goobaha sida kartida ay ku degsadaan sholad habka awood caayaan si ay u sameeyaan hawsha si degdeg ah. Tusaale ahaan, waxaad dooran kartaa warqado yaryar, xarfaha, nambarada iyo calaamadaha. Sidoo kale, waxaad dooran kartaa dhererka sirta ah. Dhinaca kale, weerarka dictionary, waxaad dooran kartaa file ee dictionary aad rabto in aad isticmaasho.
Faa'iidada la isticmaalayo Daossoft rar Recovery Password waa xeer xirfadeed ee muuqaalada buuxiyey oo ku yaal design ah xarrago leh.
Codsiga waa fududahay in la isticmaalo iyo sidoo kale. Ma jiraan wax dhibaato ah ee helitaanka waxa aad u baahan tahay.
Dhinaca A ee la isticmaalayo qalab yahay waa waqtiyo u gaabiyaa jawaab. Waxay qaadataa muddo ah ka hor sirta ah waa dillaac.
Top 5 Crackers ZIP Password
ZIP Cracker Ultimate Windows XP, Vista, 7
BIXIYAY - USD 59,00
Lahjadda Recovery ZIP Password Windows 98, Me, NT, 2000, XP, 2003, Vista, Server 2008, 7, 8
BIXIYAY - USD 40.00
Zip Tool Recovery Password Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, 2003, Vista Server 2008
KRyLack Recovery ZIP Password Windows XP, Vista, 7, 8
ZIP Cracker Ultimate
ZIP Cracker Ultimate caawisaa helitaanka sirta ah ee files ilaaliyo oo ay ku jiraan ZIP, Word iyo qaab Excel.
Screen ugu weyn ee qalabka kuu ogolaanayaa inaad dhirtuba file ah in aad rabto in aad la dillaac. Gujinaya socda kuu ogolaanayaa inaad u xulan karaan nooca sirta ah. Markaas, waxaad ka qaadan kartaa nooca dariiqada soo kabashada. Hababka ayaa la heli karo waa kooban scan, weerar caayaan-force, dictionary weerar, weerar guun ah, taariikhda raadinta, ansixinta nooca free iyo raadinta kartoo.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan qalabka kabashada password waa in taageerada ay u ma aha oo kaliya ZIP laakiin sidoo kale Word & Excel qaabab file.
Sidoo kale, tan iyo codsiga isticmaalaa habab badan oo arrinkaas sirta ah, waxaa jira fursad sare in hanaanka soo kabashada waa guul.
Mid ka mid ah dib u dhaca ah ee barnaamijka waa xaddidaadda on version xorta ah. Dhererka sirta ah in barnaamijka soo kaban karto, waa kooban ilaa shan characters kaliya. Waxaad u baahan tahay inaad bixiso USD 59,00 in ay casriyayso si nooca buuxda.
Plus, geeddi-socodka lagu soo kabsaday sirta ah waxay qaadataa waqti aad u badan.
Lahjadda Recovery ZIP Password
Lahjadda Recovery ZIP Password waa qalab lagu soo kabsaday sirta lumay ama illooba ZIP files. Waxa ay taageertaa qaabab ZIP abuuray barnaamij kasta sida WinZip, 7ZIP iyo PKZIP. Sidoo kale, ay xawaaraha waxaa filaayo in labada Processor Intel iyo AMD. Intaas waxaa sii dheer, qalab uu leeyahay saddex siyaabood ee soo kabsaday sirta ah: ciidanka caayaan, maaskaro, iyo weeraro dictionary.
Interface ugu weyn ee uu ka kooban yahay shan badhamada: file furan, bilaaban, joojin, doorbidida iyo caawin. Dhag siinaya batoonka ugu horeysay kuu ogolaanaysaa inaad dooro file ah oo ka PC. Intaa ka dib, waxaad riixi kartaa bilaabatay si loo bilaabo nidaamka. Next, waxaad dooran kartaa nooca weerarkii in aad rabto. Weerarada ay bixiyaan barnaamijka waa caayaan-force, caayaan-force maaskarada oo la dheereeyey iyo dictionary ku salaysan.
Faa'iidada isticmaalaya codsiga waa hanuunin aad talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo.
Waxaa kale oo ay leedahay habka aad u soomi password soo kabashada. Ma aha in aad sugin wakhti aad u dheer ka hor inta sirta ah waxaa soo kabsaday.
Xaddidaadda ee version demo ee app ah waa khasaaro ah. Waxa kaliya ee kuu ogolaanaysaa inaad aragto labada characters hore ee sirta ah. Si aad uga takhalusi tan aad leedahay si ay u iibsadaan nooca buuxda u USD 40.00.
Zip Tool Recovery Password
Zip Tool Recovery Password waa barnaamij loo isticmaalaa in lagu furo ZIP files lo abuuray by ZIP software kasta. Waxa ay taageertaa ZIP heerka 2.0 sirta. Weeraro caayaan-force oo dictionary ku salaysan yihiin labo ka mid ah qaababka ay barnaamijka helida sirta ah.
Interface ee qalab uu leeyahay badhamada dhowr sare ee shaashadda. Badhamada Kuwani waa bilow, joojin, caawin, ku saabsan iyo ka bixitaanka. Ka dib markii xulashada file ah, waxaad kala dooran kartaa caayaan-force oo dictionary hababka. Wixii weerar caayaan-force, ay taageerto goobaha qof caadadaas oo kale sida lambar, Latin yar, caasimada Laatiin, calaamado gaar ah iyo goobaha. Dhinaca kale, waxaad fursad u haysataa inaad doorato ka gaynta kiiska ka duwan hab dictionary. Marka kasta oo lagu cabbiro waa set oo dhan, aad haatan wax miiran laga yaabaa in ay bilaabaan.
Faa'iidada ay la isticmaalayo barnaamijka tahay awooddiisa ah inuu si deg deg ah ka soo kabsado sirta ilowday ama lunsan oo ZIP file.
Intaa waxaa dheer, wax badan oo customizations aad samayn karto si loo dedejiyo geedi socodka.
Wax dhibaato ah kuma helo waxa aad rabto in ay interface user.
Kooxda xun ee version xorta ah ee codsiga waa xadka. Waxaa soo kaban karto, kaliya sirta leh afar characters ama ka yar. Intaas waxaa sii dheer, hab dictionary u aheyn in dadka isticmaala oo lacag la'aan ah. Si aad u awoodo in ay soo jiiraan xayiraad kuwan, waa inaad bixiso USD 19,95.
KRyLack Recovery Password ZIP Free
KRyLack Recovery ZIP Free Password waa qalab lagu soo kabsaday sirta ah waxaa illooba qofka ZIP files. Barnaamijku wuxuu bixiyaa habka loo yaqaan weerar caayaan-force si aad u ogaato sirta ah.
Interface ugu weyn ee barnaamijka kuu ogolaanaysaa inaad dooro file a ZIP ka PC. Markaas, waxaad dooran kartaa oo qof set aad u malaynayso in sirta ah ku jira. Set qof Kuwaas waxaa ka mid ah Latin, caasimada Laatiin, meelaha, lambar iyo calaamadaha. Tani waxay dedejisaa soo kabashada ee sirta ah.
Waxa ugu fiican oo ku saabsan barnaamijka waa ay interface nadiif ah. Wixii barnaamij lacag la'aan ah, waxa ay leedahay ma jirto caqabado dhinaca tirada jilayaasha ah ee sirta ah taas oo muhiim ah. Waxay ku siinaysaa password dhameystiran mar hanaanka soo kabashada la dhammeeyo.
ZIP Password Cracker Pro waa software in kuu ogolaanayaa inaad dib u soo ceshano lambarka sirta ah ee ZIP archives.
Interface wuxuu leeyahay seddex isha ugu weyn: "caayaan-force Password arrinkaas ',' Password waxaa qayb ahaan loo yaqaano 'iyo' Password List iyo Text". Tab ayaa hore u saamaxaaya in aad dooratid nooc qof oo kala duwan sida xarfaha waawayn, xarfaha, nambarada iyo jilayaal kale keyboard loo dardar-socodka ah. Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad aqbasho kala duwan dhererka sirta ah. Wixii tab soo socda, haddii aad og tahay characters qaar ka mid ah sirta ah ee aad u awoodo iyaga aqbasho halkan dhaqso raadinaya. Wixii tab ee la soo dhaafay, waxa uu muujinayaa liiska sirta ah.
Waxaa gebi ahaanba bilaash ah si dhammaan qaababka la heli karaa iyada oo aan baahida loo qabo in la bixiyo lacag kastoo. Waxaa sidoo kale jira waxyaabo badan oo ka mid ah qaababka jiilka password awood badan.
Waxaa intaa dheer, software soo kabashada badbaadiyay macluumaadka qeybtii labaad ay dhacdo in aad si qalad ah dami your computer ama shilalka computer aad. Habkaani u gaar ah oo kuu ogolaanaya in aad sii wadi meesha aad iska daayeen.
> Resource > Top List > Top 5 ZIP iyo rar Crackers Password